Articles tagged 'shadreck mashayamombe'
Dark clouds hang over Mashayamombe 24 July 2018 HARARE - Dark clouds are hanging over former Zanu PF Harare province political commissar — Shadreck Mashayamombe and four other people — whose bid for the courts to drop charges of public violence against them — have been rejected by the National Prosecuting Authority (NPA). Mashayamombe, who ...
Prosecutors drop charges against Mashayamombe 13 July 2018 HARARE - Prosecutors dropped charges of political violence against expelled Zanu PF Harare political commissar Shadreck Mashayamombe who was accused of fomenting violence at the party headquarters to foil his ouster. Mashayamombe, 32, was jointly charged with Peckias Murindi, 27, Joseph Gakak...
Council investigates Mashayamombe 10 November 2017 HARARE - Harare City Council (HCC) wants know how much land Zanu PF provincial commissar Shadreck Mashayamombe owns and leases in the capital as part of its wider investigations into the land allocations in the capital. Mashayamombe is also MP for Harare South constituency which was once a sub...
Zanu PF provincial commissar wants Indians expelled 20 February 2017 HARARE - Zimbabweans were yesterday shocked by new threats from Zanu PF Harare provincial political commissar Shadreck Mashayamombe to expel all Indian nationals from Zimbabwe. The threats were accompanied by the kind of worrying rhetoric which threatens to place the ruling party in the same l...
Grace is an angel: MP 22 May 2016 HARARE - Zanu PF MP for Harare South, Shadreck Mashayamombe, has taken bootlicking to new levels by describing First Lady Grace Mugabe as an angel sent by God to help long-suffering Zimbabweans realise their full potential. Speaking to party supporters in his constituency last week, Mashayamom...